Dameeri Sinjibiil Maxay Ka Taqaan ( Abdi-Shotaly). | Salaan Media
Diyaaraddii Somali Airline Waxa Soo Af-duubay Cawil Cadami oo loo tirinaayo In uu Dilkiisa ka Danbeeyey Askarigan raggii ma adigaa ka hadhay. Run weeye oo si Dhaba ah baa loo Xaqiiji-nayaa. Khubaddii 18 May 2019 ee askarigu akhriyey, wuxuu ku haftay oo uu ugaga hadlay, siddii Qudbad sanadeedkii oo kale barlamaanka uu ka hor jeedinaayey.
Halgan muxuu ka garan karaa, isaggii baa hor illaahay ka taagan maamul, garasho iyo aqoone. Waxa haboonayd khudbadiisa inuu ka sheekeeyo, Halgankii sida uu ku yimid, laakiin ilayn muu gelin halgane, oo cidi wax uma diran jirine, muxuu ka qabtay ee uu ka sheekeegaa, isba wuu is og-yahay in aanu sakaaro saxar ku tuurine, balse Afka ayuu dhulka daray wax uu sheego daayoo, oo uu is dhex qaaday, isaga laf-tiisa baa ahaa mididdi SNM lagu dili jiray. rag badana wuu qabaa, ee Dameeri Sinjibiil maxay ka taqaan. Markaa halgan askarigu wax-ba ka garan maayo. Dilkii qorshaysnaa ee ka dhacay 1994 lagu dilay hargaysa Cawil Cadami isagaa u aabo ahaa, ee ha gaadho wakhti-geedda.
Cawil Cadami Burhaan waa halyeygii hogaaminayey howlgalkii lagu furtay 7 Arday ee dowladii macangaga ahayd ee ina siyaad ku xukuntay dill. cawil cadami oo ahaa kabtanka tirsan ciidanka Asluubta ayaa maqlay in 25 Nov 1984 dillka lagu fulinaayo. Muj cawil waxa uu si naftii hure ah u go’aansaday inuu ardayda badbaadiyo,23 Nov 1984 isaga (2 cisho j hor inta aabsy gaadjin 25), Baashe diig iyo Axmed warabe (AHUN) ,Af-duubeen diyaaradii somali Airline oo ay saarnaayeen madax dowladeed. waxayna ka degeen magaalada Addis-Ababa, cawil oo ahaa hormoodka iyo af-hayeenba u ahaa Hawlgalka waxa uu dowladii somaliya u sheegay inay sii daayaan Ardayda hadii kale uu mid-mid u dilayo madaxda diyaarada ku sugan. Af-duubkan oo indhaha caalamka soo jiitay, waxa uu tusaale ka bixiyey xasuuqa ka taagnaa somaliya, Ee la qarinaayey, 28 Nov buu af-weyne bare ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray af-duubka diyaarada sidaana lagu badbaadiyey. waxan hadaba ku soo khatimay qoraalkan, waxa ka yidhi ” Geelaw soco-soco, oo markaad ciin daaqdo baa laguu yaabaay” Xaqiiddii iyo cadaymihii waa loo hayaa, in uu isagu ka dambeeyey Dilkii Cawil Cadami, iyo weliba qaar kaloo badan oo la soo ban-dhigi doono dhawaan. waxa la isu reebaayo baa iska yare.
*N.B isma ma ogide, Waa La Iskaa Bari.